Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Icandelo lokungenisa izihambi » Umhambi oMtsha: Ukufuna Injongo njengoko iHlabathi liVulwa kwakhona
16 imiz efundwayo
I-American Hotel & Lodging Association (AHLA) ngowona mbutho wesizwe omele onke amacandelo eshishini lokulala lase-US. Ikomkhulu eWashington, DC, i-AHLA igxile kwinkxaso yobuchule, inkxaso yonxibelelwano kunye neenkqubo zophuhliso lwabasebenzi ukuqhubela phambili ishishini. Ukulandela ubhubhani we-COVID-19, ububele ibiyeyona mizi mveliso yokuqala ichaphazelekileyo kwaye iya kuba phakathi kokugqibela ukuchacha.
Kwi-State of the Hotel Industry Report i-AHLA yazisa umhambi wexesha elizayo.
Ubhubhani utshintshe kakhulu kubomi bemihla ngemihla, ukusuka kwindlela abantu abaya ngayo emsebenzini nasesikolweni ukuya kwindlela abathenga ngayo kunye nokunxibelelana nabantu. Ngelixa ezinye iindlela zokuziphatha kweli xesha ziya kuthi shwaka ekugqibeleni, i-COVID-19 yenze uphawu olungacimekiyo ebomini-kunye nokuhamba-njengoko sisazi.
Iqhutywa ziintshukumisa ezahlukeneyo
Ukuqhubela phambili, ishishini lehotele liyakuva ifuthe leendlela abathengi abatshintshe ngokusisiseko kwinto abayifunayo kunye nendlela abaziphatha ngayo kunye nokuzibandakanya neempawu.
Esikhundleni sokugxila ngokukodwa kwixabiso kunye nomgangatho ekwenzeni izigqibo zokuthenga, aba bahambi abatsha bakhuthazwa ukuba bathenge ngezinto ezibandakanya impilo kunye nokhuseleko, ukukhululeka kunye nokulula, ukunyamekela, ukuthembela kunye nodumo.
Ngapha koko, iipesenti ezingama-44 zabathengi base-US bathi ubhubhane ubangele ukuba bacinge kwakhona ngeenjongo zabo kwaye baphinde bavavanya oko kubalulekile ebomini, ngokophando lwamva nje lwe-Accenture. Uphononongo olufanayo lubonisa ukuba i-49% ifuna ukuba iinkampani ziqonde ukuba iimfuno zabo zitshintshe njani ngexesha lokuphazamiseka kunye nokujongana nezi mfuno.
Ngaphezu koko, i-38% ilindele ukuba iibrendi zithathe uxanduva olungakumbi lokubakhuthaza kwaye bazive befanelekile kunokuba benze nje
Xa kuziwa ngokuthe ngqo kwiihotele, abahambi abatsha babeka i-premium kwiindawo ezikhuselekileyo nezicocekileyo, imigaqo-nkqubo yokubhuka eguquguqukayo kunye ne-non-penalty, inkonzo yomthengi efanelekileyo, iimveliso ezizinzileyo, kunye nefuthe elihle kwintlalontle.
Abaninzi bathi bazimisele ukuhlawula imali eyongezelelweyo kwezi zikhetho kunye nokutshintshela kumboneleli wokuhamba ohlukeneyo (iihotele, iinqwelo-moya, ii-arhente zokuhamba, kunye ne-OTAs) ukuba kuyimfuneko. Enyanisweni, i-45% yabathengi bathi bacinga ukufuduka kumnikezeli wokuhamba abasebenzisayo, mhlawumbi ngokupheleleyo okanye inxalenye, kwiinyanga ezintandathu ezizayo ukuya kunyaka.
Ukunyuka koMhambi oMtsha woLonwabo
Abakhenkethi bezolonwabo abanezi zizathu zintsha baya kuba ngamandla abalulekileyo okuqhuba imfuno yokuhamba ngo-2022-utshintsho oluphawulweyo oluqale kunyaka ophelileyo emva kweminyaka yokuhamba ngeshishini ibe yeyona nto iphambili kushishino lokuhamba lwehlabathi.
Ngemigaqo-nkqubo yokuhamba yeshishini esele iguquguquka, uhambo lokuzonwabisa luza kuqhubeka nokuchacha ngokukhawuleza ngo-2022, luqhuba imfuno yehotele. Ngokohlalutyo olwenziwa yiKalibri Labs, kuyo yonke i-2022 inkcitho yehotele yokuzonwabisa iya kubuyela kumanqanaba angama-2019, kodwa ukuhamba kweshishini kuya kuba nzima ukufikelela kwi-80% yamanqanaba ka-2019. Oku kuthetha ukuba isabelo sehotele esichithwe ngohlobo lohambo siya kuqhubeka sijikwa ukusuka ngaphambi kobhubhane; ngo 2019 uhambo yorhwebo lwenziwe 52.5% yengeniso igumbi ishishini kwaye ngo-2022 kuqikelelwa kuphela ukumela 43.6% .24 Enyanisweni, uqikelelo kukuba ihlobo 2022 iya kuba lelinye elomeleleyo ngonaphakade uhambo lokuzonwabisa.
Iimodeli ezininzi zeshishini leehotele ziye zajoliswa ikakhulu kwiimfuno zabathengi beshishini elinjengendawo yokutyela kwindawo, iinkonzo zokuhlamba impahla, iindawo zokuzilolonga, kunye namaziko oshishino. Izinto eziluncedo ezilindelwe ngabakhenkethi bezolonwabo, ezinje ngeespa, iiphuli, okanye izithuthi ezilula ukuya kwiindawo eziphezulu zabakhenkethi, bezisoloko zijongwe okwesibini.
Ke ngoko, ezi hotele kuya kufuneka zenze utshintsho kwindlela ezitsala ngayo,
guqula, kwaye ugcine abathengi bolonwabo.
Xa kuthelekiswa nabahambi beshishini, abakhenkethi bezolonwabo bafuna isikhokelo esithe chatha kwinkqubo yokubhukisha kunye nolwazi oluthe kratya malunga nendawo. Bathenga ngokwahlukileyo kakhulu kunabahambi bezoshishino. Incinci malunga neenkcukacha kunye nokulula njengoko imalunga nokongeza iinkonzo ngokubhabha emva kokubhukisha okokuqala ngomoya wokufumanisa kunye nokuzonwabisa. Ukuhambisa abakhenkethi bezolonwabo kuya kuthatha ukubaluleka okongeziweyo kuba baya kuba baninzi ngo-2022.
Ubuso obutsha boMhambi woShishino
Ngoxa imfuno yohambo lweshishini iya kusilela kuhambo lokuzonwabisa, asiyonto yakudala, njengoko abanye beye bathi. Oku kuyinyani ngokukodwa e-United States, indawo ehamba phambili yoshishino ehamba phambili kwihlabathi.28 Ukuhamba kwezoshishino ngokubanzi kulindeleke ukuba kwandiswe ngo-2022 xa kuthelekiswa nonyaka odlulileyo, kwaye, ngokutsho kohlalutyo lweKalibri Labs, nge-Q3 kulindeleke ukuba ifike kwi-80. I-% yamanani ka-2019. 29 Nangona ukubuyiswa ngokupheleleyo kungalindelekanga kude kube ngu-2024, uhambo lwezoshishino lwehlabathi luqikelelwa ukuba lunyuke nge-14% ngo-2022, kunye ne-United States ne-China ebona ukunyuka okukhulu-zombini ziqikelelwa ukuba zikhule nge-30%
Ngohambo olukhulu olulawulwayo oluphantsi-kwaye kusenokwenzeka ukuba alunakuze lubuye kanye njengoko lwalunjalo ngaphambi kwentlekele-amashishini amancinci naphakathi (SMEs) aya kukhokelela kwindlela yokubuyela kwimeko yoshishino ngo-2022. Oku kuqhubeka umkhwa owaqala ngo-2020 xa Umthamo wohambo lwe-SME ubuhlile kodwa ungekho kwinqanaba elinye lokuhamba kweshishini ngexesha lokuphakama kobhubhane.
Iinkokeli kuzo zonke iihotele, iinqwelomoya, ababoneleli ngeemoto ezirentwayo, kunye neenkampani zolawulo lokuhamba zibonise ukuba iiakhawunti zabo ze-SME zibuyile ngokukhawuleza ziphuma ngo-2020 kwaye ziyaqhubeka nokugqwesa iinkampani namhlanje. Oku bakubalela ekubeni iinkampani ezincinci ziqale ukubuyela e-ofisini ngokukhawuleza, kwaye njengenxalenye yoku, zabeka abantu bazo endleleni ngokukhawuleza. Bakwakholelwa ukuba uhambo lwe-SME luxhaswa zizithintelo ezimbalwa zokuhamba kunye nemigaqo-nkqubo yokuhamba ebhetyebhetye. Ezi nkokeli zibona imfuno ekhulayo evela kwii-arhente ezincinci zokubonisana, umthetho kunye neefemu zokubala, kunye nabathengisi, kwaye balindele okufanayo ngo-2022.
Icandelo le-SME limele ithuba eliphezulu lokuba iihotele zigcwalise indawo yaphakathi evekini kwaye zilungelelanise iipateni zemfuno yolonwabo ekulindeleke kakhulu. Le yimarike engekasetyenziswa kakhulu-eyayisoloko icinezelwa lelona candelo likhulu ekuxoxiswane ngalo. Ukuze iihotele zisebenzise ngokupheleleyo eli thuba, kuya kubaluleka ukuseka uqhagamshelwano kunye nethemba kunye nokuqonda iimfuno zeli candelo. Isantya kunye nokulula kuya kuqhubeka kubalulekile, kodwa abahambi beshishini le-SME ngokuqinisekileyo baya kugxila kwimiba yezempilo nokhuseleko ngakumbi ngoku kunangaphambili.
Amacandelo Abahambi abasakhulayo ekufuneka bawabukele
Ukufika komsebenzi okude ngexesha lobhubhane-kunye nokuqhubekeka kokuqheleka kwawo ukusukela oko iinkampani zenze iimeko zokusebenza eziguquguqukayo ngaphandle kwemfuneko-kukhuthaze ukuvela kwamacandelo amatsha abakhenkethi adibanisa ishishini kunye nezolonwabo.
Ukuhamba okuyonwabileyo-apho abahambi bezolonwabo be-piggyback kunye nohambo lweshishini bekunye-kubizwe ngokuba ngubhubhane wesilivere. Ngelixa la malungiselelo engekatsha, ayexhaphakile phakathi kwabahambi abancinci ngaphambi kobhubhane.
Namhlanje, ukuhamba nge-bleisure yeyona nto iphambili phakathi kwabahambi bamashishini kuwo wonke amaqela abantu. Ngapha koko, olunye uphononongo luka-2021 lwabahambi beshishini behlabathi lufumanise i-89% ifuna ukongeza iholide yabucala kuhambo lwabo lweshishini kwiinyanga ezilishumi elinesibini ezizayo.
Ezinye iingcaphephe zohambo zicinga ukuba uhambo lokubhabha-ukuya-entlanganisoni kunye nokubuya-ubuya-ekuhambeni kwentlanganiso yosuku luya kuba yinto yakudala kwaye uhambo lweentsuku ezininzi lwe-bleisure ekugqibeleni luya kuba "luhambo olutsha lomsebenzi."
Olu tshintsho lunokwenzeka kuba iinkampani zithande ukunyamezela olu hlobo lohambo lweshishini.
I-Digital nomads - abantu abanokuguquguquka kokusebenza ukusuka naphi na kwaye bathathe indlela - nabo bayanda. Bamele ukucinga kwakhona okunzulu kutshintsho lwemveli phakathi komsebenzi kunye nokuhamba, apho abantu bebesebenza khona
ukuhamba okanye ukuhamba ngomsebenzi. Abahambi bedijithali bahamba ngelixa besebenza, bemisa kwiindawo ezahlukeneyo kwaye bahlale ixesha elide njengoko befuna, baze baqhubele phambili. Ukufumaneka koqhagamshelwano kuphela kwento ethintela ukhetho lwabo lokuhamba. I-Skift inike ingxelo yokuba i-3.7 yezigidi zabantu baseMelika banokuthi babekwe kwindawo yokuhlala kwaye basebenze njenge-digital nomads. Ngelixa icandelo le-niche namhlanje, uhlalutyo lweemarike lubonisa ukuba luya kukhula ngokukhawuleza kwaye lunamandla.
Sinokulindela ukufiphala kwala macandelo njengoko amava abahambi abatyhalela kwindlela yokusebenza esisigxina yedijithali.
ITHEKNOLOJI INDLELA YOKUBUKELA
Itekhnoloji idlala indima ekhulayo ekwenzeni ukuba ishishini lehotele likwazi ukuphendula kwiimfuno eziguqukayo zabahambi kunye nezinto abazikhethayo. Sijoyine ne-OracleHospitality ukuze siqonde ezona ndlela zinkulu zetekhnoloji ezilindelekileyo ngo-2022 nangaphaya
Ukuyigcina ingumntu ngetekhnoloji. Ukuqulunqwa kobuchwephesha kuya kuthatha
enye itsibela phambili, kunye neehotele usebenzisa itekhnoloji yedijithali ukwenza lula umthwalo kunye
ngakumbi, ukwanelisa undwendwe ngalunye ngamava lundwendwe olutsha. Oku kubandakanya
yonke into esuka kukhetho lomntu ngamnye lokutya kunye nesiselo kunye nokutshekisha okuguquguqukayo kunye
amaxesha okuphuma ukuya ekwandisweni kwebhanwidth yegumbi kuwo onke amacandelo abahambi. Ngelixa iihotele zodidi oluphezulu zaziwa ngokukhethekileyo ngenkonzo echazwa kukuchukunyiswa komntu, iihotele zazo zonke iindidi ziya kusebenzisa izixhobo zobuchwepheshe ezingakumbi ezibanceda “bazuze ulwazi,” ngokuqhubekayo baphucula amava eendwendwe kunye nokuhlangana okanye ukugqitha imigangatho yenkonzo esekiweyo.
Ukulungisa kwakhona uhambo lweendwendwe kunye nabasebenzi. Imfonomfono, izixhobo zokuzisebenzela zivumelekile
iindwendwe zokujonga uninzi lohambo lweendwendwe zemveli-ukusuka kubhukisho ukuya
ukuphuma-ngaphandle kokunxibelelana ngokuthe ngqo nabasebenzi. Ngenxa yoko, abasebenzi basehotele
bachitha ixesha elincinane kwimisebenzi, efana nokujonga ukungena, kwaye banokulandela
amanyathelo anokuthi enze impembelelo enkulu kwinkonzo yabathengi.
Ukutshintsha izisombululo zetekhnoloji yangaphakathi. Kangangeminyaka, amakhonkco amakhulu ehotele anamaqela angaphakathi aphuhlisa ulawulo lwepropathi yawo kunye nogcino oluphakathi
iinkqubo. Kodwa ukunqongophala kokudityaniswa, imiba yokuhambelana, kunye nemiba yokuthotyelwa-
kunye neendleko zokugcina ezi zisombululo zifanelekile kwaye zikhawuleza-kudala imingeni
kumaqela angaphakathi. Ngamaqela amaninzi ehotele ahlengahlengisa ngexesha lo bhubhani, kunye
i-industry-wide focus on recovery and growth, iihotele ezininzi ziya kuhamba ukusuka kwizixhobo zangaphakathi ukuya kwi-"off-the-shelf" iminikelo evela kubathengisi beshishini. Olu tshintsho aluyi kunciphisa kuphela iindleko zokusebenza, kodwa luya kuphucula ukunikezelwa kwenkonzo kubasebenzi nakwiindwendwe.
Ukwandisa ukusetyenziswa kwe-PMS ye-agile. Iinkqubo zolawulo lwePropati (PMS) zingundoqo
imisebenzi yehotele. Ngokukhula okukufutshane kwi-apps "exhoma" ngaphandle
I-PMS, ekhawulezayo, elula, kwaye ephantsi okanye engenaxabiso udibaniso luyimfuneko ukuze uqhubeke
ukusungula izinto ezintsha kunye nenkqubo yetekhnoloji esebenzayo. Akukho mboneleli we-PMS unokudibana ne
iimfuno zabo bonke abahotela. Ngenxa yoko, abaqhubi beehotele baya kuguqukela ngakumbi kwisisombululo se-PMS esinothungelwano olukhulayo lwamaqabane okudibanisa anika amandla okwandisiweyo.
Umzobo 5 - Iihotele ziphendukela kwiTekhnoloji ukuze zilungele ikamva
Oku ngakumbi: Technology | iTshayina | eunited States | Accenture | Covid-19 | Uhambo loshishino | ishishini
Inkqubo yokuqala yokubeka iliso ilumkisa abaphenduli bokuqala kwizinto ezingcolisa umoya eunited States|
Iinyanga ezintlanu zohambo lwaselwandle: Umhambi waseTaliyane wokuFika eSan Diego eunited States|
Accenture ishishini Uhambo loshishino iTshayina Covid-19 Technology eunited States
Yintoni entsha eBahamas ngoMeyi
Umkomishinala weGunyabantu lezoKhenketho eMartinique ubhengeza...
Amalungu e-WTN ayakhwaza “Yenza Svidaniya”...
Amalungelo eeFlaya: I-FAA kufuneka imisele imigangatho yobungakanani besitulo senqwelomoya
I-Australia kunye ne-Netherlands: I-Russia kufuneka ihlawule ...
Idatha entsha kwi-Relapsed/Refractory Multiple Myeloma...
Ukutya kweFomula yoNtsana ngoku kuyakhunjulwa ngenxa yeSalmonella